Inona ny paikadinao amin'ny fifandraisana anatiny? | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 20, 2008 Alahady, Novambra 25, 2012 Douglas Karr
Horonantsary mahatsikaiky iray amin'ny paikady marketing anatiny. Manao vazivazy amin'ny olona foana aho fa misy mekanika manamboatra ny fiarany farany… heveriko fa matetika ny mpivarotra no manadino ny mametraka ny vokatra sy ny serivisiny ao anatiny alohan'ny hamoahana ny teny!
Tags: paikadin'ny fifandraisanafifandraisana anatinypaikadin'ny fifandraisana anatiny
21 Okt 2008 amin'ny 12:08 PM
Torohevitra tsara. Ireo mpivarotra dia tokony hijery matetika ao anatiny matetika mba hamaritana raha tokony haparitaka amin'ny besinimaro ny hetsika ataon'izy ireo. Matetika ny mpivarotra dia variana loatra amin'ny fizotrany dia hadinony ny mieritreritra ny zava-drehetra.
10 Nov 2008 tamin'ny 3:28 PM
Tia ny horonantsary! Ny iray amin'ireo tsy fahombiazana amin'ny marika / marketing lehibe indrindra hitako tamin'ny asako dia ny nandroahan'ny mpanorina ny paikady vaovao, saingy tsy nahavita namidy izany tamin'ny mpiasa izy ireo. Mbola ratsy kokoa noho izany, satria tsy namidin'ny mpanorina mihitsy ny serivisy dia tsy fantatr'izy ireo ny fahitan'ny mpanjifa ny serivisy sy ny marika.
Tamin'ny faran'ny andro, ny ekipa mpivarotra dia nandà (eny - REFUSED) hampiasa fitaovana marketing vaovao sy terminolojia vaovao. Ireo mpanorina dia tsy maintsy niverina tany amin'ny tabilao fanaovana sary taorian'ny nanipazany izany vola rehetra izany.
Ka ampidiro ny # 1 ny mpiasao amin'ny famolavolana ny paikady marketing, satria izy ireo dia eo amin'ny laharana voalohany ary # 2 raha tsy afaka mivarotra ilay paikady vaovao amin'ny mpiasa ianao dia tsy ho azonao amidy amin'ny mpanjifa izany.
(Somary namerina namerina, nametraka ity fanehoan-kevitra ity tao amin'ilay tranonkala naneho hevitra momba ilay horonan-tsary)